Pkpụrụ azụ ahịa nke ndị zụrụ ahịa | Martech Zone
Ndị na - azụ ahịa taa etolitela omume pụrụ iche tupu ịzụrụ - ọbụlagodi mgbe ha na-azụ ahịa na mpaghara ha. Ojiji nke ngwa mkpanaka na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka tupu ịzụta offline na-eto eto na ewu ewu. Ndị ahịa na-achọta ebe ịzụ ahịa, ịgụ nyocha, na-achọ azụmahịa na nyocha ngwaahịa ahụ. Nnukwu ozi maka ndị na-ere ahịa bụ na ịzụ ahịa n'ime mmadụ ka dị mkpa.
Onwe, M agbasaghị na-eme nnyocha online na ịzụta online… ayafi na m na-eche na-esi ngwaahịa na aka m ozugbo. Akpọrọ m asị ịzụ ahịa, n'agbanyeghị, yabụ enwere m ike ịdị iche karịa ndị ọzọ. Otu ihe achọtara m bụ na ịzụ ahịa n'ịntanetị anaghị echekwa m ego ọ bụla. Ọtụtụ mgbe, achọpụtara m na m na-akwụ ụgwọ karịa online karịa na anọghị n'ịntanetị.
Infographic site na Milo. Milo bụ ịzụ ahịa mpaghara dị mfe. Milo na-enyocha shelf ụlọ ahịa dị na mpaghara na ezigbo oge ịchọta ọnụahịa kachasị mma na nnweta maka ngwaahịa ịchọrọ ị nweta-ugbu a.
Tags: ecommerceàgwàmkpebi ịzụtaịzụta nnyocharesearchretailere ahịashoppingomume ịzụ ahịa
Leverage Call Ndepụta maka Campaign mmesho
Iselọ ọrụ SEO SEO
Mee 25, 2012 na 4: 36 PM
Ihe omuma di nma. Enwere m ike iji ha.